Ungasusa njani amaqhakuva: iingcebiso zendalo kunye nezisebenzayo | Amadoda aQinisekileyo
Ungasusa njani amaqhakuva
Sonke sinamaqhakuva okanye sikhe sibe namaqhakuva ngamanye amaxesha ebomini bethu. Oku kungenxa yokuba ulusu lwethu alugqibekanga kwaye luhamba kwinkqubo yendalo ebangela ukuba ulusu luvuselele kwakhona malunga neentsuku ezingama-28. Le nkqubo yokuphinda yenzeke ibangela ukuba iintsalela zeeseli ezifileyo zihlale kulusu ezenza ukuba zibukeke zibuthuntu ngamehlo. Kuqhelekile ukuba le nkqubo yolusu yendalo ivelise ubumdaka obuvela kulusu njengamnyama, amaqhakuva kunye neoyile egqithisileyo. Kule nqaku siza kukufundisa ususa njani amaqhakuva.
Ukuba uzame yonke into kwaye awazi ukuba ususa njani amaqhakuva, le yiposti yakho.
1 Ziintoni amaqhakuva
2 Khusela amaqhakuva
3 Ungasusa njani amaqhakuva
4 Isoda yokubhaka kunye neorenji ukwazi ukususa amaqhakuva
Njengoko besitshilo ekuqaleni kwenqaku, ulusu lwethu lunenkqubo yokuzihlaziya kwendalo. Ngexesha lale nkqubo, ulusu olufileyo, ubumdaka kunye nezinye iibacteria zinokuveliswa ezibanjiswe kwiifollic zeenwele. Konke oku kuhlala phantsi komphezulu wolusu kwaye kuphele kukhangeleka ngathi ngamaqhakuva. Iimpumpa zizinto ezivale ezi pores kwaye zithintele ulusu ekuhlaziyeni njengesiqhelo njengoko lifuna.
Enye yezona zinto zibalulekileyo kumaqhakuva bubuhle babo obungathandekiyo. Olu hlobo lokungcola ebusweni luyabonakala ngokukhawuleza. Abantu abaninzi, ngakumbi abantu basetyhini, bazama ukufihla amaqhakuva ngokusebenzisa izithambiso. Into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba konke oku ayisiyonto yobuhle, kodwa yokwazi ukhathalela impilo yolusu lwakho.
Ngaphambi kokuba ufunde ukususa amaqhakuva, into ebalulekileyo kukwazi ukuba ungabathintela njani ekubonakaleni. Inyani yile yokuba kukho umba wemfuza wokubonakala kwenani elikhulu okanye elincinci lamaqhakuva. Le meko yemfuza kunzima ukuyichasa. Nangona kunjalo, Kukho ezinye izinto zangaphandle ezichaphazela ukubonakala kwayo kwaye sinokuzilawula.
Ke ngoko, eminye imikhwa esinokuyifumana kule mihla yethu yokuthintela ukuvela kwamaqhakuva okanye ukunciphisa isixa sayo zezi zilandelayo:
Sukuchukumisa amaqhakuva xa evela
Kufuneka uhlambe ubuso bakho rhoqo ngesepha efanelekileyo yoku.
Musa ukutya ukutya okunamafutha okanye okunezinongo ngesixa esikhulu
Kuphephe ukutya ubisi, ukukhwaza, iswekile okanye ukunciphisa inani labo kakhulu
Sela amanzi aneleyo
Gwema ukusebenzisa izithambiso kangangoko
Yenza umthambo womzimba ukugcina ukujikeleza kwegazi okuhle kunye nokuphelisa ityhefu egqithisileyo
Nje ukuba sizame ukuthintela inkangeleko yazo kangangoko kunokwenzeka, siza kufunda ngokususa amaqhakuva. Ukuba wenze onke la maqhakuva akhankanywe apha ngasentla asabonakala ebusweni bakho, kunokwenzeka ukuba ususe. Siza kunika ezinye zeengcebiso ezifanelekileyo zokufunda ngokususa amaqhakuva.
Into yokuqala kukuzama ukubasusa ngesoda yokubhaka. Kungenxa yokuba le khemikhali isebenza njengeasidi kunye nesiseko kwaye inokunceda ekunciphiseni nakuphi na ukungalingani kwi-pH yolusu. Unobangela wokungalingani yeyona nto ixhaphakileyo ekubonakaleni kwamabala kunye namaqhakuva. Isoda yokubhaka iya kunceda ukomisa ulusu lwakho kwaye isuse ioyile egqithisileyo ebangela ukuba ukukhula kweentloko ezimnyama. Ikwanayo neempawu zokuthomalalisa ukudumba kunye nokubola okunceda ukunciphisa ubungakanani bazo.
Ukuba sidibanisa i-baking soda kunye namanzi, iya kwenza intlama entle nenamaqhuma eza kunceda ekucoceni nasekukhupheni ulusu ngaxeshanye. Kuya kunceda ukususa ioyile, ukungcola, kunye neeseli zolusu olufileyo. Kufuneka sidibanise isoda yokubhaka kunye namanzi amancinci. Ubuso kufuneka buhlambuluke ngaphambi kokuba bubusebenzise ukuphucula iziphumo. Akucetyiswa ukuba ushiye isoda yokubhaka kumaqhakuva ubusuku bonke, njengoko besenza abantu abaninzi. Oku kunokumisa kakhulu ulusu kwaye kulonakalise. Ukuba unesikhumba esinovakalelo, kufuneka ulumke usebenzisa isoda yokubhaka. Ingabangela ukuthintelwa kobomvu kulolo lusu lubuthathaka ngakumbi.
Ukuthintela oku, eyona nto icetyiswayo kukusebenzisa isoda kwindawo ethile kwaye isebenze. Ukuba ubona ukuba isenzo sihlala, isoda yokubhaka ayisosisombululo sakho.
Isoda yokubhaka kunye neorenji ukwazi ukususa amaqhakuva
Ukuba phambi kokuba sibonile ukuba i-bicarbonate enamanzi ibingumxube olungileyo, isisombululo sokugqibela yiorenji. Iorenji yengozi inceda ukuvala imingxunya kunye nokondla ulusu ngokuluqaqambisa. IBicarbonate isebenza njenge exfoliator yendalo kwaye inceda ukususa zonke iintlobo zobumdaka. Oku kukhutshwa kunceda ulusu ukuba luphefumle ngcono kwaye kukhuthaze ukuphefumla kweeseli. Ngale ndlela, inokugcinwa isempilweni, intsha kwaye inombala othambileyo kwaye ukhanyayo.
Ukuze usebenzise umxube wesoda kunye neorenji kuya kufuneka udibanise icephe lesithako ngasinye de ube ngumxube wokuncamathisela. Gcina ukhumbula ukuba incindi yeorenji kufuneka ibe yendalo. Kufuneka ifakwe ebusweni ukuphepha inxalenye yamehlo kwaye ivumele ukuba isebenze imizuzu eyi-15. Kamva, hlikihla ubuso bakho ngeminwe yakho ukomeleza le mpembelelo. Yipule ngamanzi.
Kukho enye indlela yokufunda ukususa i-blackheads kwaye ayifuni i-baking soda okanye nayiphi na ingxube. Kule ndlela ufuna kuphela amanzi kunye netawuli. Kufuneka uzise amanzi emathunjini kwaye xa kufikwa kumathumba, wasuse emlilweni. Okulandelayo, siza kubeka itawuli phezu kwentloko yethu kwaye sifunxe umphunga emanzini. Oku kuyakusinceda ukuba sivule iipali ukuze kuphume konke ukungcola. Gcina intloko yakho inxibelelana nomphunga malunga nemizuzu eli-10. Unyango luyakunceda ukungavali iimpumlo kunye nokunyanga iingxaki zokuphefumla.
Ubushushu obugqithisileyo ebusweni bunokuphelisa ukuwomisa kakhulu. Ke, Akucetyiswa ukuba usebenzise le ndlela ngaphezulu kwamaxesha ama-2 ngeveki. Okokugqibela, hlamba ubuso bakho ngamanzi abandayo ukuvala ii pores kwakhona.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngokususa amaqhakuva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ungasusa njani amaqhakuva
Ukunyamekela iindevu zakho: iingcebiso ezilungileyo